Jwxo-shiil, oo ku Guuldaraystay Ujeedadii Melbourne – Rasaasa News
Jul 8, 2011 Jwxo-shiil, ONLF, oo ku Guuldaraystay Ujeedadii Melbourne
Colaad iyo xin mudo hal sano ah u dhaxeeyey Ina-dhuubo iyo Jwxo-shiil, ka dib kolkii ay garab baneeyeen Qaaxo iyo Cisal, loogu qabtay kulan Melbroune, la doonayey in lagu xaliyo uu ku dhamaaday guul daro iyo Jwxo-shiil oo laggaga Oohiyey.
Kooxda Jwxo-shiil, xinka, xigtada iyo xoolo tabcashadu waa ku xariir ee laguma xanto, waana wax u caado ah ishaysashada xubnaha u dhaxaysa, kuwaas oo ah garabyo wada shaqeeya.
Xaasidnimadu mararka qaar waxay keentaa dil, waana ta galaafatay dad badan oo ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisa. Dadka dilka xaasidku keenay loo dilay waxaa ugu horeeyey Deeq Cabdiraasin iyo Sheekh Bashiir, Ina-dhuubo haduu joogi lahaa Afrika xaqiiq ma noolaadeen.
Kooxda ayaa koox kooxo ah, xubno ay ka mid yihiin In Mukhtaar, Maadey iyo Macalinka oo saldhigoodu yahay Yurub waa isku talo qaaraanku waa u gaar, kooxda 2aad oo ah Ina-dhuubo, Qaaxo iyo Cisal oo saldhigoodu yahay Australia waa si la mid ah iyo Jwxo-shiil oo wata beeshiisa oo dhaqaale badan ku bixisana waa gaar.
Hadaba, dabayaaqadii sanadkii 2010, ayey qaar ka mid ah kooxda Jwxo-shiil, kolkii ay arkeen in arintu ribatay soo jeediyey in wadada ay ku socdaan tahay mid banjar ah. Xubnahaas ayaa soo jeediyey laba arimood in mid la yeelo; in Jwxo-shiil, jagada baneeyo si loo kasbado dad badan oo Jwxo jeclaa laakiin u nacay Jwxo-shiil iyo in la xaadh xaadho wadadii Ethiopia lagula heshiin lahaa.
Labada arimood wixii aan ahayn wanaag iyo ururnimo midna ma sii jirayso, sidaas waxaa ku adkaystay Ina-dhuubo, waxaana ku weheliyey arinkaas Qaaxo iyo Cisal.
Fikirkaas Jwxo-shiil iyo kooxda kaleba way duniyeen, gadaalna waxaa fikirka lagu gooni yeellay Ina-dhuubo, oo dhudo la baacsaday isaga oo lagu yidhi “Ibraahin Dheer ayey isku hayb yihiin oo lama aamini karo.”
Ina-dhuubo, xilalkii uu kooxda Jwxo-shiil, u hayey waa laga qaaday, isna wuu ka gaabsaday kooxda in kasta oo uu ONLF Ideecadaha ka difaacay.
Hadaba, arimihhi kooxda Jwxo-shiil, way ka sii dareen wax ka dhaca mooyee Kooxda wax ku soo biirayna ma jiraan. Waxay isweydiiyeen Ina-dhuubo, dib loo soo celiyo maadaama uu ugu cay iyo khibrad badan yahay xaga xaga kooxda. Waana in la xaalmariyo Ina-dhuubo oo la yidhaahdo waad naga qumanayd waanan kugu khaldanay.
Melbroune, waxaa lagu qabtay shir ay isugu timid Somali aan waxba la socon, oo u haysta calanka ONLF mid ka mid ah maamulada Somalida ee maalin walba la magacaabo. Laakin ujeedada shirku waxay ahayd in lagu heshiisiiyo Jwxo-shiil iyo Inadhuubo iyada oo goob joog yihiin Qaaxo iyo Cisal.
Habeenimadii ay bisha June 2 ahayd, ayaa waxaa la isugu keenay Jwxo-shiil iyo Ina-dhuubo guriga Cisal, hadal badan iyo kolba gabay maslaxad ah ayay Roda qaadaysay waxse keeni waa.
Jwxo-shiil, ayaa caado u leh in uu maanta oo dhan dhagaysto dadka, ka dibna kolka ay daalaana wax walba ka fulshada marka ay caajisaan. Laakiin Ina-dhuubo waa qaad cunaa xiliyada dambe ee Habeenka ayeyna maskaxdiisu shaqaysaa, waana ninka ugu af-nijaasan kooxda.
Kolkay xili dambe ahayd ayuu Jwxo-shiil, ku yidhi “waxa aad sheegtay oo dhan waa run, waa lagu xaal marin, waa laggugu khaldamay Binaadan baan nahay.” “Waxaan rabnaa in aad gasho gudaha adiga oo maraya Kenya, kharashna waxaad ka qaada cusub ee TARAN. ”
Ina-dhuubo, oo mooday in uu tagay Kenya ayaa ku yidhi Jwxo-shiil, “hadaad aaminaad leedahayd, ama aad doonayso jabhada Ina Dolal baadan disheen.” Hadalkaas waxaa ka cadhooday Cisal, oo hadalkii boobay oo yidhi “hadaan ogaan lahaa in dilka la sheegayey uu yahay sida aad maanta u dhigteen, Adeerkay Sheekh Maxamed Dubad ma dhinteen.” Qaaxo ayaa ugu jawaabay Cisal is daji N/hure arimuhu sidaas ma ah, maan gaab waa cadho u joog!.
Jwxo-shiil, waxaa dhagtiisa ku dhacay hadalo fool-xun oo qabyaaladeed iyo bahdil ka fog wixii la odhan jiray “maalin baas baad ONLF soo dhex gashay, waadna u dhamaysay” Ina-dhuubo ayaa yidhi.
Jwxo-shiil, oo daal iyo hurdo la,aan bastiis ah ayaa la sheegay in uu ilmo ceshan waayey. Waxaana guriga isaga baxay Ina-dhuubo iyo qaaxo.
Maalintii labaad waa la wada yimid shirka ku sheegii layslamase hadlin, kulan dambe oo uu Qaaxo damcayna Ina-dhuubo, ayaa diiday.
Warqada go,aamada ay ku sheegeen waxaa qoray Cisal iyo Ina-dhuubo, oo aan runta isu sheegaynin.
Jwxo-shiil, intii uu joogay Melbroune waxay u ahayd murugo, marka laga reebo in yar oo uu joogay guri nin Baadari ah oo la yidhaahdo Jone, oo ay xidhiidh dhaw leeyihiin Qaaxo.
Intii uu joogay Jwxo-shiil, Melbourne waxaa sii kordhay nacaybkii iyo cadhadii u dhaxaysay Ina-dhuubo iyo isaga.
Warkan waxaa na soo gaadhsiiyey mid ka mid ah dhaliyarada la shaqaysa kooxda Jwxo-shiil